Britain oo dib u billawday xogtii ay la wadaagaysay sirdoonka Maraykanka - BBC News Somali
Image caption Haraaga waxyaabihii loo adeegsaday qaraxa oo uu daabacay wargeyska New York Times
Booliiska Britain ee baadhitaanka ku haya weerarkii is qarxinta ahaa ee lagu qaaday magaalada Manchester ayaa go'aansaday in uu dib soo celiyo macluumaadkii uu la wadaagayay sirdoonka dalka Maraykanka.
Iskaashigii ay la samaynayeen sirdoonka Maraykanka ayay markii hore si ku meelgaar ah u hakiyeen ka dib markii macluumaadkii ay u gudbiyeen lala sii wadaagay warbaahinta dalka Maraykanka.
Ilaa iyo hadda toban ruux ayaa loo xiray weerarkaas.
Mas'uuliyiinta UK ayaa caro ka muujiyay sawirrada muujinaya haraaga waxyaabihii loo adeegsaday qaraxa oo mas'uuliyiinta Mareykanka ay la wadaageen wargeyska New York Times.
Waxay sidoo kale dowladda Britain ka carootay in magaca ninka weerarka geystay loo dusiyay warbaahinta Mareykanka saacado uun ka dib markii uu dhacay weerarka oo ay ku dhinteen 22 qof, 64 qof oo kalana ay ku dhaawacmeen.
Ra'iisalwasaaraha UK Theresa May ayaa sheegtay in ay si cad ugu sheegi doonto madaxweyne Trump in macluumaadka la wadaagayo ee sirdoonku ay noqdaan kuwa xafidan. Waxayna Trump kula kulmi dontaa shirka madaxda gaashaan buurta NATO ee ka dhacaya magaalada Brussels.
Mareykanka, UK, Australia, Canada iyo New Zealand ayaa ku midoobay isbaheysiga loo yaqaanno ''Shanta indhood'' ee wadaaga xogta sirdoonka la xiriira argagixisada.
Image caption Qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarka Manchester
Haweeney ayaa ka mid ah dadka loo qabtay weerarkii ka dhacay Manchester, xilli ay booliska sheegeen in ay baarayaan "shabakad" la rumaysan yahay in ay ka dambeysay qaraxaasi.
Image caption Shakhsiyaad ka tirsan qoyska ninkii fuliyay weerarka Manchester ayaa la qabtay